Linus Torvalds anosiya kukura kweLinux uye anokumbira ruregerero | Linux Vakapindwa muropa
Linus Torvalds anosiya kukura kweLinux uye anokumbira ruregerero
Haisi dambe, ndizvo zvatakaverenga mu LKML. Linus Torvalds aratidza yake chaiyo tsamba nezve kutanga kwe Linux 4.19-rc4 inoratidzwa pakarenda yeinuxeros ese kwete nekuti inzira inokosha, asi nekuti ndiyo inowirirana neLinus B. Torvalds 'chiziviso chekusiya chirongwa cheLinux. Kana iri iyo nyowani Regedza Mukwikwidzi 4, haisi kunyanya kuburitswa kana nematambudziko akawandisa, zvese zvaenda zvakanyanya kana zvishoma sezvakarongwa uye zvinouya nemagadziriso kunyanya mumadhiraivha enetiweki, uye mamwe masisitimu senguva dzose.
Nekudaro, ichi chinyorwa mu LKML Inoperekedzwa nevamwe kukumbira ruregerero kubva kuLinus Torvalds yehunhu hwake mune yeruzhinji neyakavanzika nhaurirano dzakaitwa maererano nekuvandudzwa kwetsanga. Uye haangokumbira ruregerero kune vanogadzira kernel kuti angave akakanganisa kana kugumbura, sekutsanangura kwaakaita. Zvinotaridza sekunge chimwe chinhu chakaitika musangano wekupedzisira chamuita kuti anzwisise, kana kuti, zvamuita kuti anzwisise kuti mutauro wake uye nzira yekupindura zvinogona kugumbura kana kukuvadza manzwiro evakagadzira sezvatakaona mune zvakaitwa naSara Sharp nevamwe vazhinji.
Nokudaro, Linus Torvalds anozivisa nezvekurega basa, anosiya chirongwa cheLinux kwenguva pfupi. Inguva yakadii kugara kunze isu tisingazive, asi isu tinoziva kuti ichatora imwe chirongwa senge payakasiya iyo kwechinguva kugadzira git chishandiso. Pamusoro pezvo, achafungisisa nezvehasha dzake dzekutaura nguva yese iyi uye nekukanganisa manzwiro akaburitswa, uye akatoburitsa pachena muLKML kuti agone kugadzira firita yematsamba kuti adzivise iwo mazwi anogumbura. Kutendeseka, email yemusiki haiwanzoitika, Linus inenge isingazivikanwe yakaratidzwa uye kuva akatendeseka pamusoro pezvakaita kuti asvike pano.
Zvinoita kunge zvese zvinobva musangano wekupedzisira wegore iyo inounza pamwechete vanochengeta tsanga, vamwe makumi matatu evanogadzira kernel uye vanochengeta zvikuru vanosangana kuseri kwemikova yakavharwa kuti vakurukure zvisiri zvehunyanzvi zvekusimudzira nyaya. Sezvineiwo Linus akakanganwa uye akange achengetera iwo mazuva kuti ave nezororo nemhuri yake. Izvo zvakakonzera kuti sangano rinonoke chiitiko uye Linus akakurudzira kuti chiitiko chiitwe pasina iye, asi vakaramba uyezve:
“Asi mamiriro ese aya akabva atanga hurukuro yakasiyana zvachose. […] Ndakaona kuti ndakanga ndisina kunyatsonzwisisa vamwe vevanhu vaibatanidzwa. […] Kurwiswa kwangu zvisina basa kumaemail hakuna kuve kwehunyanzvi kana kudikanwa. Kunyanya nguva dzandakaenda nadzo padanho rega. Mukutsvaga kwangu mhinduro iri nani izvi zvine musoro kwandiri. Zvino ndinoziva kuti zvainge zvisina kunaka uye ndine hurombo. […] Nguva yekutarisa mugirazi. […] Ndinozorora uye ndigamuchire rubatsiro rwekunzwisisa manzwiro evanhu uye maitiro ekupindura nenzira kwayo. […] Izvi hazvireve kuti ndatsva uye ndoda kuenda. Kwete. Ndinoda kuenderera mberi nechirongwa ichi kwandakatsaurira makore anoda kusvika makumi matatu. »
Sekuona kwedu, anotoziva kuti aigona gamuchira rubatsiro zvepfungwa ... Zvino chii? Zvakanaka, murume wechiGerman uye weruoko rwerudyi waLinus, Greg Kroah-Hartman achatora hutungamiriri hwechirongwa uye zvese zvichaenderera pasina iye musiki, kudzamara afunga kudzoka ... Rini? Hatizivi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linus Torvalds anosiya kukura kweLinux uye anokumbira ruregerero
Ndeupi musoro wetsamba ... uye kunyepa kwawakaisa.
Simba repasi rose rakakura kwazvo. Vamwe vese vanotaura zvehuswa!
Pindura José Rodríguez
Trisquel, kugovera KWEMAHARA kwakazara neSpanish mavambo
Slimbook Kymera Aqua, yekutanga pc yemitambo neGnu / Linux